NETFLIX ရှိ EMILY IN PARIS တွင်ဤတုန့်ပြန်မှုများသည်ကားပြပွဲ၏ကားပျက်ကျမှုကိုသက်သေပြသည် - သတင်း
Netflix ဟာ Emily In Paris ဆိုတဲ့ဟာသစီးရီးအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်လိုက်ပြီ။ ဒါကိုတုံ့ပြန်မှုတွေကရော - ရောထွေးရမလား။
စီးရီးမှာပါရီရှိဇိမ်ခံပစ္စည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီနှင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်သောချီကာဂိုမြို့မှလူမှုမီဒီယာမန်နေဂျာအမ်မလီ (Lily Collins မှကစားသူ) အကြောင်းပါ။ သူမ၏သူဌေးသည်ပါရီသို့မပြောင်းနိုင်သောအခါသူတို့အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီကပြင်သစ်အသိပညာဗဟုသုတမရှိသော်လည်း Emily ကိုပို့ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ Instagram မှနည်းလမ်းများနှင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏အတွေးအမြင်များဖြင့်သူမ၏ပြင်သစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကျောင်းသို့ကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်သည်။ ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တည်ရှိနေသောဝေဖန်သူတိုင်းကဤပြပွဲသည်ဇာတ်ကွက်အားလုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကာနယ်စပ်ဒေသထိုးစစ်များဖြစ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းကြည့်ရှုသူများသည်လွယ်ကူသောကြည့်ရှုနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောတီဗွီကိုစွဲလမ်းနေပုံရသည်။ ဤတွင်လူတိုင်းပြပွဲအကြောင်းကိုပြောနေခဲ့ရာပါပဲ။
လူတွေကသင့်ရဲ့ Instagram သွားရောက်ကြည့်ရှုမည်မျှတွေ့မြင်ဖို့ဘယ်လို
အစအတွက်, Emily In Paris သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်
ဒီတော့ဒီစီးရီးကိုဝေဖန်သူများကလုံးဝဖျက်လိုက်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြင်သစ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်clichéနှင့် stereotype နှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။ ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက် အဓိကဇာတ်ကောင် Emily ဂုဏ်ယူယဉ်ကျေးမှုအဝိဇ္ဇာရှိပါတယ်ဟုပြောသည်။ များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်နေတုန်း အုပ်ထိန်းသူ စာရေးသူများကဖြည့်စွက်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည့်ပြင်ပကိန်းဂဏန်းများကိုအဂတိလိုက်စားမှုဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ သင်ကပုံစံတစ်မျိုးဟုအမည်ပေးပြီးပထမဖြစ်စဉ်သုံးခုအတွင်းတွင်အမ်မလီသည်၎င်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရရုံသာမကအမေရိကန်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
TV ပြန်လည်သုံးသပ် site ပေါ်တွင် ဝေဖန်ရေးသမားများက၎င်းကိုရှက်ဖို့ကောင်းသည့်စီးရီး၊ ပါရီမြို့၏လုံးဝမှားယွင်းသောပုံရိပ်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာရယ်စရာလုပ်ရပ်ရယ်စရာပါပဲ။ ပဲရစ်အားလုံးဖက်ရှင်, အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ကရုဇ်နှင့်ပတ်သက်။ ခဲ့သကဲ့သို့။ အမှတ်အခြားရေးသားခဲ့သည်: ကပြင်သစ် caricatured မပါလျှင်အကြီးအပါပြီနိုင်ကြောင်းတစ် ဦး ကစီးရီး။ ဒီစီးရီးမှာတော့ပြင်သစ်မာနထောင်လွှား, ညစ်ပတ်, ပျင်းရိခြင်း, ယုတ်, ခါးသီးအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ ကံကောင်းတာကဒီအမေရိကန်လူငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ရောက်လာတယ်။ ပြင်သစ်သရုပ်ဆောင်တွေကဒီစီးရီးမှာသရုပ်ဆောင်ဖို့ဘာဖြစ်လို့သဘောတူတာလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိသည်။
လွတ်လပ်သော ကရုဇ်စ်ကိုစားသူမည်သူမဆိုအပါအ ၀ င်ပြပွဲကိုမုန်းတီးမည့်သူများစာရင်းကိုရက်ရက်စက်စက်ရေးသားခဲ့သည်။
အိုကေ, ဒါကြောင့်တွစ်တာအများစုကသူတို့ဟာ Paris မှာ Emily ကိုစွဲလမ်းနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်၊ အဲဒါကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမရဲ့အင်္ကျီတွေကိုကျော်ပြီးဒုတိယရာသီလိုအပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြပွဲလည်းအများကြီးကဲ့သို့စီစဉ်ထားလျက်ရှိသည်။ ပြည်သူ့ကလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရဲ့လုံးဝနားမလည်ခြင်းနှင့်ထိုးစစ်င်ကပြပွဲလိမ်လည်လှည့်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖက်ရှင်အကြောင်းဖြစ်တယ်, Emily ဆင်မြန်းတကယ် ... ဆိုးဆိုးရွားရွား? Yikes ။
Lily Collins သည် ၂၄ နာရီအတွင်းပြီးဆုံးသွားသောပဲရစ်ရှိအမ်မလီ၌တစ်ချိန်ကလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသော်လည်းလုံးဝစုံလင်သည်
- Ira Madison III (@ira) အောက်တိုဘာ 5, 2020
- ဒါးခ်အော်စတင် (@ParadiseLAust) အောက်တိုဘာ 5, 2020
ကြည့်တယ် #EmilyinParis ကြံစည်မှုအဘို့
- 𝐖𝐢𝐤𝐢🥀 (armaarvella) အောက်တိုဘာ 5, 2020
၎င်းကိုနှစ်သက်ချင်သော်လည်းအခြားဥရောပဝေဖန်သူများနှင့်သဘောတူရမည် #EmilyInParis နားမလည်နှင့်ထိုးစစ်အဖြစ်ရှင်းရှင်းသေံအဖြစ်ချွတ်လာပါတယ်။ ပါးနပ်။ အခွင့်ထူးခံအမေရိကန်အဖြူအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဘာသာစကားကိုပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲအခြားနိုင်ငံသို့သွားခြင်းသည်မည်မျှရယ်စရာကောင်းကြောင်းကိုသတိပေးပါ။ https://t.co/8WnttGLn8W
- လီဒီယာ Strauss (@harzermadel) အောက်တိုဘာ 5, 2020
paris လုယူသောသူအတွက်အမ်မလီ *
သူတို့ကလှည့်စားမှုကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ပါ၊ camille ဟာပိုကောင်းသင့်တယ်။
- 𝐒 (@devilwearsYSL_) အောက်တိုဘာ 3, 2020
နေဆဲအမ်မလီ shit များအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်သည့်အခါ paris အတွက်အမ်မလီဖက်ရှင်အကြောင်းကိုပြပွဲဖြစ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပတ်ပတ်လည်ငါ့ခေါင်းကိုရဖို့ကြိုးစားနေ ...... pic.twitter.com/ya0SpZZDUM
- 𝒸𝒽𝒶𝓁𝓊𝓀𝓎𝒶 (@balenciogre) အောက်တိုဘာလ 4, 2020
Paris အတွက်အမ်မလီထိုကဲ့သို့သော 2012 ခုနှစ် abc မိသားစုပြပွဲဒါကြောင့်သိသာရဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ငါတိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်
- mariam (@skintinty) အောက်တိုဘာလ 4, 2020
ပဲရစ် ‘stylist အတွက်အမ်မလီ SERVING !!
- BLM (@jacquenergy) တွင် အောက်တိုဘာ 2, 2020
Emily Paris တွင် Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• Emily In Paris တွင်တီထွင်သူသည်ရာသီနှစ်ခုအတွက်အကြံဥာဏ်များစွာ * ရှိပြီးဖြစ်သည်
အထည် ၅ ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ
• ဒီကြောက်စရာကောင်းသောရာသီ Netflix ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံး 13 ကြောက်စရာကောင်းသောရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး
• Netflix အပေါ် Ratched နှင့်ပတ်သက်။ ဤ 29 memes အဆိုပါမတ်မတ်ထက်ပိုကောင်းတယ်